... बाबुआमाका अगाडि म बदमास जापानी बालक
काजुअो इसिगुरो अन्तर्वार्ता: इस्पाइजेल अनलाइन/अनु.: सुरज सुवेदी
यो प्रशंसायोग्य कुरा हो किनकि कम्तीमा जर्मनीका मानिसहरूले अमेरिकी वा बेलायती लेखकहरूप्रति ध्यान दिइरहेका छन्। तर यस्तो सोचाइ र ट्रेन्डले मलाई 'डिस्टर्ब' गर्छ। हरेक देशको आफ्नै साहित्यिक परम्परा ‘लिटरेरी ट्रेडिसन’ मुख्य केन्द्रबिन्दुमा हुनुपर्छ। तर यसको मतलब अरू देशको बारेमा इच्छा नै नराख्नु भनेको हैन।
तपाईं आफूलाई 'ग्लोबल राइटर' हुनको लागि उपयुक्त छु जस्तो लाग्छ? जापानमा जन्मिनुभयो, पाँच वर्षको छँदा आमाबाबुहरूसँगै बेलायत आउनुभयो। जापानको संस्कृतिसँग अझै गाँसिनुभएको छ जस्तो लाग्छ?
तपाईंको पछिल्लो उपन्यासको सेटिङ बेलायतमा छ तर यो धेरै 'इङ्लिस' त लाग्दैन नि?
बेलायतको बारेमा मैले कहिल्यै किताब लेख्ने सोचेको थिइनँ। म यहाँका धेरै राम्रा बेलायती लेखकहरूलाई चिन्छु, जो बेलायत समाजको ज्वरो नाप्न लालायित छन्। तर म यसलाई ‘इङ्ल्याण्ड’ भन्छु र यो एक काल्पनिक सेटिङ मात्र हो। जब मैले ‘दि रिमेन्स अफ दि डे’ लेखेँ, धेरै मानिसहरूले त्यसलाई 'इङ्लिस नोबल' भने। त्यो इङ्ल्याण्ड पनि त बनाइएको इङ्ल्याण्ड हो नि।
मुराकामीले अमेरिकी र बेलायती 'पप कल्चर'लाई निश्चित जापानी पक्षहरूसँग मिसाउँछन् हैन?
हो र म सोच्छु जापान त्यस्तै पनि छ। मलाई कुरोसावाले २० वर्ष पहिलाको समय बोलेको सुन्न मन छ र उनले त्यही कुरा बनाइदिए। उनलाई कसैले सोध्यो ‘सेक्सपियरलाई किन एडप्ट गर्नुहुन्छ, यो त तपाईंका लागि धेरै नै अन्तर्राष्ट्रिय कुरा भएन?’ उनले भनिदिए ‘यो एकदमै प्राकृतिक कुरा हो।’ किनकि उनी सेक्सपियरसँगै धेरै फ्रेन्च तथा रसियन लेखकहरूसँग हुर्किए। उनले भने, ‘साँच्चैको जापनिज मान्छे यस्तै हुन्छ।’ यदि तपाईं टोकियो जानुभयो भने त्यहाँ पपुलर कल्चर र जापानको 'ट्रेडिसनल कल्चर' मिसिएको पाउनुहुन्छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज २१, २०७४, ०६:२६:१०
सुनिल पोखरेल सरलाई गुगल गरेपछि मात्र चिनें : प्रेमवर्षा